1Ukubheja kwezemidlalo i-xbet eJamani ► Amava e-1xbet 1XBET ► IIRHAFU - NGAPHANDLE KWENTLAWULO NEENTLAWULO ► Iinkqubo zokubheja kunye neempawu ezizodwa
Gcina 1XBET EZEMIDLALO, IRHAFU – NGAPHANDLE KWEMIRHUMO NEENTLAWULO
1I-xBet ayihlawulisi abathengi ngerhafu yokubheja. Irhafu ithwalwa kuphela ngababhuki baseRussia, Oko kukuthi, iyayihlawulela kwintengiso yayo hayi kubathengi.
Le modeli inqabile phakathi kwabanye abaqhubi. Isizathu sinokuba siyinyani, ukuba uninzi lwabathengi be-1xBet babhalisiwe eRashiya kwaye bambalwa kubo babheja kuyo. Iindleko esixekweni zifikeleleka kakhulu. Kodwa oko kuthetha ukuthini ukubheja abathandi baseJamani?
Akukho rhafu yokubheja yabathengi baseJamani
Ukusasaza bukhoma kwi-HD kuyafumaneka
Imida ephezulu yokubheja ithetha ukungahambi kakuhle
24/7 inkonzo yabathengi
Ziqhelanise nobume bewebhusayithi
Akukho rhafu ukubheja kwi 1xBet for Germany
Abanye ababoneleli bokubheja bahlawula kuphela irhafu yokubheja kwiibhendi ezahlukeneyo, umzekelo ukubheja okukhulu okanye ukubheja ngoku. Nangona kunjalo, kunqabile kakhulu, ukuba iibhukumeyikha ziqokelele zonke iirhafu.
Irhafu ye 5% ukubheja ngakunye kwezemidlalo 1. EyeKhala 2012 yaziswa eJamani kwaye isebenza kubo bonke abadlali, abahlala eJamani kwaye babhalisa. Ekuqaleni, abanye ababhuki bathatha irhafu yokubheja. Nangona kunjalo, ngokukhawuleza yavela yabiza kakhulu.
1I-xBet ayaziwa kakhulu eJamani, nangona uluhlu lwezibonda lukhulu kakhulu kwaye lubanzi. Ukubheja kuvelisa ingeniso ephezulu kunye nabathengi ababhaliswe eRashiya. Uye waphumelela kakhulu kwiivenkile ezininzi zokubheja eRashiya. Abanye babathengi bayo ababhaliswe eJamani, i-1xBet ithatha irhafu yokubheja.
Ungayiphepha njani irhafu yokubheja kwi1xBet?
Ngenxa yokuba i-1xBet ihlawula irhafu yokubheja ngokwayo kwaye ayixhomekekanga ekuwineni okanye kwizibonda, awunyanzelekanga ukuba uyiphephe irhafu. Ukulahleka kwerhafu yokubheja apha kunxulumene nokubheja, hayi abathengi. Awunyanzelekanga ukuba uzame amaqhinga asemthethweni okanye awungekho mthethweni, ukujongana neerhafu, ngaphandle kwemingcipheko kunye neengozi.
1xBet kuthelekiswa nabanye iibhukumeyikha
Kutheni uninzi lwababoneleli bemidlalo yokubheja behlawulisa 5%, kodwa hayi 1xBet? Kunyaka 2012 Irhafu emiselweyo ekubhejeni kwezemidlalo nokubheja yaziswa ngokubanzi eJamani. le ndlela, ukubheja ngakunye, eyenziwe eJamani, Irhafu ye 5% isihloko.
Xa kungekho rhafu ihlawulwayo, iibhukumeyikha zisebenza ngokungekho mthethweni. Akukho rhafu yokubheja e-Austria naseSwitzerland. Elizweni, apho ukubheja kwenziwa khona, ayinamsebenzi. Ingathi, oko kuphela elizweni, apho umthengi obhalisiweyo engena khona kubhejo.
Ukuba umqhubi uyaqhubeka nerhafu yokubheja kumthengi, yiba 5% yenzuzo yomthengi. Oku kuluncedo kubhuki, apho abathengi belahleka.
Lo mgaqo-nkqubo ulandelwe ngababhuki abaninzi. Enye indlela yile, ukuba iibhukumeyikha zingayidlulisi irhafu, kodwa zihlawule. Yile ndlela yenza ngayo i-1xBet. Kule meko, umthengi uya ebangcono kwaye umthengisi kufuneka ahlawule.
Iziphumo zerhafu yokubheja kukhetho lokubheja lwe-1xBet zichazwa ngumzekelo
Umzekelo kufuneka uyenze icace, kangakanani 1xBet yahlukile kwezinye iibhukumeyikha xa ujongene neerhafu ukubheja. Uncedo apha ngokucacileyo lilele kumthengi. 10 € ukubheja kusekelwe kumathuba okuqala 10 setha. Xa umthengi ephumelela, uyaphumelela 10 x 10 €.
Le yinzuzo enkulu 130 €. Abanye ababhuki balindele irhafu yokubheja 5%. Oko akuthethi kubathengi 10 €, ekugqibeleni ube nje 9,50 € efunekayo. Amathuba okuphumelela ngu 95,00 €. Abanye abaqhubi babiza iirhafu kwinzuzo. Kule meko hlala 10 €, ngaphandle kokuba inzuzo nge 5% ityala. Ngaphandle kwe 130 Ukuphumelela, win kuphela abathengi 95,00 €. Isiphumo siyafana.
1I-xBet ithatha irhafu epheleleyo, Ukusetyenziswa kunye nenzuzo zihlawuliswa. Ke ukuba umthengi 10 € ngesabelo se- 10 kubeka, uyaphumelela 130 €. Akukho nto ilahlekileyo.
Gcwalisa izibonelelo zibangelwa ngumthengi. Irhafu yile 5%, kule meko 5 €, kulapho i-1xBet ihlawulwa simahla kwi-ofisi yerhafu yaseJamani. Ukubheja ezincinci, oko akwenzi mahluko mkhulu kubathengi. Nangona kunjalo, ukuba umthengi uyayenza 10.000 Ukuphumelela kwe-Euro kunye 500 Ngaba ukugcina euro, oku kwenze umahluko omkhulu. Le yokubheja 1xBet ke ngoko kuba abathengi German, ngakumbi abo bathatha umngcipheko, inomtsalane kakhulu.
Kuya kufuneka unike ingxelo ngokuphumelela ukubheja kwezemidlalo kwiofisi yerhafu kwaye ulawule kwakhona?
Njengoko sele kukhankanyiwe, kukho kuphela ababoneleli ukubheja ezemidlalo ezimbalwa, uthathe iirhafu zokubheja. Nangona kunjalo, baninzi abaqhubi, ngubani oyibhengezayo, akukho rhafu inokutsalwa kubo.
Nangona kunjalo, unokufunda ngokufutshane ngokwemiqathango ngokubanzi kunye neemeko, ukuba irhafu kufuneka ithwalwe ngumthengi, ithetha ukuba, umthengi kufuneka axele kwi-ofisi yerhafu. Oku akunjalo nge-1xBet. Iirhafu ziyahlawulwa, ngaphandle kwabathengi ukuba bakhathazeke ngayo.
Imibuzo malunga nerhafu yokubheja ye-1xBet
Ngaba irhafu yokubheja ihlawuliswa ngokubheja okanye amabhaso??
1Ukubheja kwe-xBet akubeki rhafu ekubhejeni okanye ekuwineni. Iirhafu zihlawulwa ngokwahlukeneyo ngababhuki kwaye azichaphazeli ukubheja kwaye / okanye inzuzo evela kubathengi babo.
Yintoni irhafu ukubheja kwi 1xBet?
Irhafu yokubheja isemthethweni 5%. Kunjalo, ihlawulwe yi 1xBet kwaye umthengi akafumani nayiphi na kuyo.
Ngaba umntu othile angathoba irhafu yokubheja?
Hayi, Awunakho ukuthengisa irhafu yokubheja.
I-1xBet ikwahlawula irhafu yokubheja phesheya?
Kumazwe amaninzi e-European Union akukho zibophelelo zokubheja. Emaphandleni, ekufanele ukuba loo mali ihlawulwe, enxibe le 1xBet.
Ngaba umntu unokwala, ukuhlawula irhafu ukubheja kwi 1xBet?
Ukubheja irhafu kuhlawulwa ngokuthe ngqo kwiofisi yerhafu yaseJamani yi1xBet. Umthengi akalahli nayiphi na inzuzo kwaye akanampembelelo kurhafu. Ukwala irhafu yokubheja akunakwenzeka.